အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန် အမေရိကန်B-2နျူးကလီးယားဗုံးကြဲလေယာဉ် ဟာဝိုင်အီလေတပ်စခန်းကနေ စတင်ထွက်ခွာလာတယ်လို့ အတည်မပြူနိုင်သေးတဲ့ သတင်းဌာနတွေကနေ သတင်းတက်လာပါတယ်။
Posted by သဘာဝမြေ at 4:58 PM No comments:
အီရန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ယာဉ်တန်းကို ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ MQ-9 Reaper ဆိုတာ....
အီရန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ယာဉ်တန်းကို ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်ခတ်
တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်တွေရဲ့ MQ-9 Reaper ဆိုတာ....
Posted by သဘာဝမြေ at 6:41 AM No comments:
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ ခေါင်းဆောင်များကြောင့် စစ်ရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနေရဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြော
ဒီနေ့အထိ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းနေဆဲ၊ အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတချို့က ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရာမှာ ငြိမ်းငြိမ်ချမ်းချမ်း ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစား နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တ
Posted by သဘာဝမြေ at 8:31 AM No comments:
၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း နေကြတ်မည့်နေ့ရက်များ
ခရာဇ်နှစ်၂၀၁၉ ခု ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ၊ မြန်မာနှစ် ၁၃၈၁ခု ပြာသိုလဆန်း ၁ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် နေကြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားမည်ဖြစ်သည်။ နေကြတ်ချိန်မှာ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၈နာရီ ၅၉မိနစ်၅၁စက္ကန့်အချိန်တွင် စတင်ပြီး နံနက်
Posted by သဘာဝမြေ at 7:02 AM No comments:
Labels: သတင်းထူး, သိပံ္ပနည်းပညာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားတဲ့နေရာမှာ မိုင်း ၃ လုံးကွဲ
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသှားရောကျနတေဲ့ မာနျအောငျမွို့မှာ မိုငျးသုံးလုံးကှဲ
■ နိုငျငံတျော တိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သှားရောကျနတေဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ မာနျအောငျမွို့မှာ ဒီနနေံ့နကျ မိုငျး ၃ လုံး ဆကျတိုကျပေါကျကှဲမှုတှဖွေဈပှားခဲ့ပါတယျ။
Posted by သဘာဝမြေ at 8:39 AM No comments:
Labels: ရခိုင်သတင်း, သတင်းထူး, သရော်စာဆောင်းပါး၊ ဟာသ
"ဥစ္စာစောင့်တို့ အပြန်" စ/ဆုံး
"ရွာမှာ မိုးမကောင်းတာ (၃)နှစ်ကျော်ပြီဗျ...စပါးကမထွက် နှမ်းကမထွက်နဲ့ ကြာရင်တော့မွဲမှာပဲ...လုပ်တာကမှ
Posted by သဘာဝမြေ at 5:48 AM No comments:
Labels: ဝတ်ထု၊ ဝတ်ထု ဇာတျလမျး
လွမ်းရစ်နေဦးပေါ့ ….. မောင့်မှာ (၃) Zawgyi/Unicode
လှမျနရေဈဦးပေါ့ မောငျ့မှ(ာ ၃)
လှပလွန်းသော တနင်္ဂနွေနေ့၏ မနက် ၅း၃၀ အချိန်ကတည်းက ဗိုလ်ကြီး ကျော်ဇောတစ်ယောက် အိပ်ယာမှ နှိုးကာသီချင်းလေးတအေးအေးနှင့် မမမေ ဆီသွား ရောက်တွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်နေလေပြီ။ ဒီနေ့ကား ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ တစ်ခန်းတည်းအတူ နေ တစ်ပတ်စဉ်တည်း ဗိုလ်ကြီးမိုးဇော် တစ်ယောက် အိပ်ချင်မူးတူးနှင့်ထကာ
Posted by သဘာဝမြေ at 5:30 AM No comments:
လွမ်းရစ်နေဦးပေါ့ ….. မောင့်မှာ (၂)
လွမ်းရစ်နေဦးပေါ့ ….. မောင့်မှာ
“ကျော်ဇော ….. ဒီနေ့ လစာပေးအဖွဲ့တွေတက်မယ်
အခုတစ်ခေါက်က အရာရှိ အချို့ပါပါလာတယ် …. ”
ဗျူဟာ G3 တစ်ဖြစ်လဲ ဗိုလ်ကြီးအောင်ကျော်မိုးရဲ့အမှာစကားသံတွေ။ ဆက်သွယ်ရေးတပ်စုမှူးပေမဲ့ လူအင်အားနည်းပါသော သူတို့ဗျူဟာရုံးအဖွဲ့တွင် ကျော်ဇောတစ်ယောက် ဦးစီး(တ) တာဝန်အချို့ကိုပါပူးတွဲထမ်းဆောင်ရသည်။
“မင်းဆီကသားသမီးတွေကိုသေချာမှာ …. သေချာမှာ
Posted by သဘာဝမြေ at 10:09 AM No comments:
မိုငျးထောငျဖောကျခှဲရနျ ရောကျရှိနသေညျ့ AA အကွမျးဖကျ သောငျးကနျြးသူ နှဈဦးအား မိုငျးမြားနှငျ့အတူ အသေ ဖမျးဆီးရမိ
ရခိုငျပွညျနယျ၊ အမျးမွို့နယျအတှငျး လုံခွုံရေးဆောငျရှကျနသေော တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ယနညေ့နေ ၄ နာရီခနျ့တှငျ ကံ့ကျောမွိုငျကြေးရှာအနီး အရပျဝတျ ဝတျဆငျထားသညျ့ AA အကွမျးဖကျ သောငျးကနျြးသူနှဈဦးအား ဖောကျခှဲဖကျြဆီးရာတှငျ အသုံးပွုသညျ့ ရီမုမိုငျးလေးလုံးနှငျ့အတူ အသဖေမျးဆီးရမိခဲ့သညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ကံ့ကျောမွိုငျကြေးရှာအနီး လုံခွုံရေးဆောငျရှကျနသေော တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ အဆိုပါ ကြေးရှာကားလမျးအနီး အရပျဝတျ ဝတျဆငျထားသညျ့ မသင်ျကာဖှယျလူနှဈဦး တှရှေိ့သဖွငျ့ စဈဆေးမှုမြား ဆောငျရှကျရနျချေါယူစဉျ ထှကျပွေးသှားသဖွငျ့ ရပျတနျ့ရနျ သတိပေးခွောကျလှနျ့ ပဈခတျဖမျးဆီးခဲ့ရာ အဆိုပါနှဈဦးကို အသဖေမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး၊ ၎င်းငျးဝနျးကငျြတဈဝိုကျအား စဈဆေးရှာဖှရော ခြုံပုတျအတှငျး ဝှကျထားသညျ့ YINXIANG-125 မျောတျောဆိုငျကယျတဈစီးနှငျ့အတူ ဆိုငျကယျတူးဘောကျ
Posted by သဘာဝမြေ at 9:54 AM No comments:
ကော့သောငျး မွို့ ၊ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျအတှငျး၌ ခိုးဝငျဘင်ျဂါလီ(၁၇၃)ဦး ဖမျးဆီးရမိ --ကော့သောင်း မြို့ ၊ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အတွင်း၌ ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ(၁၇၃)ဦး ဖမ်းဆီးရမိ
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကော့သောငျး မွို့ ၊ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျအတှငျး လုံခွုံရေး ဆောငျရှကျနသေညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဒီဇငျဘာ ၁၅ ရကျ နံနကျပိုငျးတှငျ သံကြှနျး ၏အနောကျဘကျ ရမေိုငျ ၁၃၅ မိုငျခနျ့ အကှာ၌ မသင်ျကာ
Posted by သဘာဝမြေ at 4:22 AM No comments:
ဝတ်ထု၊ ဝတ်ထု ဇာတျလမျး (3)
သရော်စာဆောင်းပါး၊ ဟာသ (14)
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန် အမေရိကန်B-2နျူးကလီးယားဗုံးကြဲလေယာဉ် ဟာဝိုင်အီလေတပ်စခန်းကနေ စတင်ထွက်ခွာလာတယ်လို့ အတည်မပြူနိုင်...
"ဥစ္စာစောင့်တို့ အပြန်" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "ရွာမှာ မိုးမကောင်းတာ (၃)နှစ်ကျော်ပြီဗျ...စပါးကမထွက် နှမ်းကမထွက်နဲ့...